လက်စွဲစာအုပ်မြေပဲခွံ,လက်လည်ပတ်မြေပဲ decortication စက်
လက်စွဲမြေပဲခွံစက်အားမြေပဲနှင့်မြေပဲဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည် . ဗစ်တာအမှတ်တံဆိပ်လက်စွဲမြေပဲခွံစက်သည်ရိုးရှင်းပါသည်, တန်ဖိုးနည်း ,၎င်းသည်အိမ်ထောင်စုများနှင့်အသေးစားသမဝါယမများအသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်.
မြေပဲသည်အဖိုးတန်ပြီးအရေးကြီးသောသီးနှံပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းနီးပါးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အချို့သောနိုင်ငံများရှိတောင်သူလယ်သမားငယ်များကိုနှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးရေးဝင်ငွေ၏လေးပုံတစ်ပုံကျော်ကိုအာဖရိကနိုင်ငံအချို့တွင်ပေးသည်။ . မြေပဲရရှိရန်မြေပဲကိုအက်ကွဲရမည်, ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ဆီကိုထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့်အစားအစာပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
မြေပဲကိုမြေပဲမှဖယ်ရှားသည့်ရိုးရာနည်းလမ်းမှာလက်ဖြင့်အက်ကွဲရန်ဖြစ်သည်,သို့သော်အာဖရိက၏အသေးစားလုပ်ကိုင်သူများတွင်အခွံမာသီးများအများအားဖြင့်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်. လက်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းသည်အနိမ့်ကျသောနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်,သို့သော်အလုပ်သမားများအနေဖြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနိမ့်ကျပြီးကုန်ထုတ်စွမ်းအားလည်းနိမ့်ကျလိမ့်မည်။ လက်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုသည်တောင်သူလယ်သမားများကိုကြီးမားသောဖိအားပေးမှုဖြစ်စေသည်။ စျေးကွက်ရာသီမကုန်မီမြေပဲခွံမလိုအပ်ပါ။,ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကရိတ်သိမ်းလယ်ကွင်းအပေါ်အလုပ်လိုအပ်ပါတယ်. သူတို့ကိုလေးလံသောအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်စေရန်မြေပဲကိုဖျက်သိမ်းသည့်စက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်.
Victor Farm Machinery သည်လက်ဖြင့်မြေပဲခွံစက်ကိုလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်,ကျေးလက်ဒေသများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအသေးစားများမှလယ်သမားများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်မြေပဲခွံသည်ချွေတာသော၊,လျှပ်စစ်မီးမလိုဘဲမြေပဲခွံကိုအလွယ်တကူကျိုးပဲ့နိုင်သည်.
လက်စွဲမြေပဲ Sheller စက်၏လက်စွဲစာမူ
လက်ဖြင့်မြေပဲခွံကိုသတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသောကာစရာကုလားကာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. ဘောင် cranked အဖြစ်, အခွံမာသီးဟာ roller နှင့်မျက်နှာပြင်အကြားအာကာသရိုက်ထည့်ပါ. စစ်ဆင်ရေး၌တည်၏, အဆိုပါ roller လှည့်နေစဉ် Hopper အတွက်မြေပဲကို roller နှင့်ခွက်အကြားရှင်းလင်းရေးသို့တိုက်ကျွေးသည်. ထို့နောက်မြေပဲကို roller နှင့် screen ကြားတွင်ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်အခွံခွာသွားသည်. ပြီးနောက်မြေပဲခွံခဲ့ပြီး, Kernel နှင့် shell တို့သည်မျက်နှာပြင်မှကျသွားသည်.
မော်ဒယ် VHS-1 VHS-2
စွမ်းရည် 40~ 50kg / h 100~ 150kg / h
ပါဝါ လက်စွဲစာအုပ် လက်စွဲစာအုပ်
အရွယ်အစား 68*35*115စင်တီမီတာ 85*60*130စင်တီမီတာ
အလေးချိန် 25ကီလိုဂရမ် 80ကီလိုဂရမ်